अन्तर्राष्ट्रिय — onlineakhabar.com
प्रकाशित : पौष २९, २०७४ | १६३ पटक हेरिएकोसमाचार
संसारमा विभिन्न हर्कत गर्ने मानिसको कमी छैन । यस्तै हर्कत हङकङमा एक युवतीले गरेकी छिन् । दुनियालाई नै छक्क बनाउने उनको यो हर्कत सुन्दा जोकोही छक्क पर्छन् । आफ्नो बाउले अर्को आमा भित्राउन लागेपछि उनी आफै नया श्रीमति बनिदिइन् । बाबुको श्रीमति बन्नुको कारण पनि रोचक छ । उनी सौतेनी आमा बन्न लागेकी युवतीलाई चिन्थिन् ।ति युवतीलाई उनी मन पराउँदैन थिइन् । आफुले मन नपराएकी युवती आफ्नो घरमा भित्रिन लागेपछि उनी आफै बाउको श्रीमति भइन् । २६ वर्षिया ती युवतीले २००९ मा पहिलो पहिलो पटक बाबुसंग सुतेकी थिइन् । हाल उनको मुद्धा हङकङको अदालतमा विचाराधिन छ ।...Read More
प्रकाशित : पौष १९, २०७४ | २०६ पटक हेरिएकोसमाचार
६ वर्ष पहिले, मे महिनाको दुई तारिख । अपरान्हतिर ओबामा मन्त्रीमण्डलका विशेष सदस्य ह्वाइट हाउस पुग्ने तयारीमा थिए । मानिसहरुको नजरबाट बच्नका लागि हिलारी क्लिंटनको गाडी जानीजानी वेस्ट विंगमा पार्क गरिएको थिएन, जहाँ उनी सधैं पार्क गर्थिन् । ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा समूहले ह्वाइट हाउसभित्रै एक संचार केन्द्र बनाएका थिए जो एडमिरल मेक्रावेनसँग जोडिएको थियो । एडमिरल ती व्यक्ति हुन् जो त्यतिबेला पूर्वी अफगानिस्तानका जलालाबाद शहरमा थिए । यो केन्द्रलाई ‘सर रुम’ को नाम दिइएको थियो जसलाई सिआइएको मुख्यालय र पेन्टागनको आप्स सेन्टरसँग पनि भिडियो लिंकमार्फत जोडिएको थियो । 1 यसमा आउने सबै गुप्तचर फिड्समाथि जनरल जेम्स कार्टराइटले निगरानी राख्ने...Read More
प्रकाशित : पौष १७, २०७४ | १८० पटक हेरिएकोसमाचार
एजेन्सी । सामाजिक संजालमा तपाइँले अधिकांश राम्रा र सुन्दर तस्बीर देख्नु भएको होला । तर, पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालमा एक युवतीको फोटो निकै भाइरल भएको छ । सुडानकी यी युवतीलाई आफू यतिधेरै चर्चित हुन्छु भन्ने सोचेकी समेत थिइनन् । १९ वर्षीया यी युवतीका पछाडि धेरै मोडलिङ एजेन्सी लागिपरेका छन् । यी मोडलिङ एजेन्सी यी युवतीलाई साइन गर्न चाहन्छन् । यो सबै दुई वटा फोटो इंस्टाग्राममा राखेका कारण भएको हो। १९ वर्षीया अनोक याई नाम गरेकी यी युवती १९ वर्षकी भइन् । उनले इंस्टाग्राममा राखेका दुई वटा फोटो उनले अमेरिकाको वाशिंटनस्थित हावर्ड विश्वविद्यालयको होमकमिङ फेस्टिवलमा खिनाएकी थिइन् । त्यहाँ केही फोटोग्राफरले अनोक...Read More
प्रकाशित : पौष १७, २०७४ | १२७ पटक हेरिएकोसमाचार
एजेन्सी । आन्ध्र प्रदेशमा एक युवतीले युवकमाथि तेजाब फ्याँकेकी छिन् । घटना गुंटुर जिल्लाको हो जहाँ पुसिलका अनुसार हिमाबन्दु नामकी २४ वर्र्षीया एक युवतीले आफ्ना पूर्व प्रेमीमाथि कथित रुपमा तेजाब फ्याँकेकी छिन् जसका कारण उनको मृत्यु भएको छ । हिमाबिन्दु आफ्ना चार वर्ष पुराना प्रेमीले अन्य महिलासँग विवाह गरेकोमा रुष्ट थिइन् । विवाहको एक दिन पछि कथित रुपमा एक युवतीले उनलाई भेट्नका लागि आफ्नो साथीको घरमा बोलाइन् । इलियास भित्र आउने बित्तिकै उनले उनीमाथि तेजाब फ्याँकेको बताइएको छ । स्थानीय मानिसहरुले त्यसपछि इलियासलाई अस्पताल पुर्याए जहाँ उनको मृत्यु भयो । गुंटूरका पुलिस अधिक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठीले बीबीसीलाई बताए, ‘उनी एक नीजि अस्पतालमा फार्मासिस्टको रुपमा...Read More
प्रकाशित : पौष १७, २०७४ | ११३ पटक हेरिएकोसमाचार
सीमापारी आतंकवाद बन्द नहुन्जेल पाकिस्तानसँग क्रिकेट सिरिज हुँदैनः सुष्मा स्वराज
नयाँ दिल्ली । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सीमापारी आतंकवाद बन्द नहुन्जेल पाकिस्तानसँग क्रिकेट सिरिज नहुने बताएकी छिन् । विदेशमन्त्री स्वराजले संसद बैठकमा पहिलो पटक क्रिकेटको सम्बन्धमा बयान दिँदै सोमबार यस्तो बताएकी हुन् । विदेशमन्त्री स्वराजले भनेकी छिन्, ‘जबसम्म पाकिस्तानले भारतविरुद्ध आतंकवाद फैलाउने तथा सैनिकलाई आक्रमण गर्ने क्रियाकलाप गर्न बन्द गर्दैन, तबसम्म दुई देशकोबीचमा क्रिकेट सिरिजको कुनै सम्भावना छैन ।’ न्युट्रल भेन्यू तर्था तेस्रो देशमा पनि भारत–पाकिस्तानबीच प्रतियोगिता स्वराजले नहुने बताइन् । क्रिकेट र आतंकवाद एकैसाथ चल्न नसक्ने उनले बताइन् । भारत र पाकिस्तानकोबीचमा पछिल्लो पाँच वर्ष क्रिकेट सिरिज हुन सकेको छैन । अन्तिम पटक २०१२/१३ मा दुई देशबीच सिरिज भएको...Read More
प्रकाशित : पौष १७, २०७४ | १२५ पटक हेरिएकोसमाचार
काठमाडौं । उत्तर कोरियाले नयाँ वर्षको अबसरमा सन्देश दिएको छ। सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले नयाँ वर्ष २०१८ को शुभ कामना सन्देश दिँदै वर्षभरी परमाणु बमको स्वीच अाफ्नो डेस्कमा हुने बताएका छन् । नेता उनले २०१८ मा अमेरिकाले निहु खोजे कुनैबेला पनि अमेरिकामाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले अमेरिका पूरै अाफ्नो परमाणु हतियारको दायराभित्र रहेको समेत बताएका छन् । ‘यो धम्की होइन, वास्तविकता हो’ सरकारी टेलिभिजनमा बोल्दै नेता उनले भने । उत्तर कोरियाको सरकारी संचारमाध्यमहरुका अनुसार पहिलो पटक छिमेकी दक्षिण कोरियाप्रति भने नरम देखिएका उनले संवादका लागि खुला रहेको संकेत दिएका छन् । उनले भने, ‘सोल विन्टर...Read More
प्रकाशित : पौष १५, २०७४ | २२५ पटक हेरिएकोसमाचार
अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस परिसरमा रहेको एउटा ऐतिहासिक वृक्ष अब केवल केही दिनको पाहुना मात्र बनेको छ । २ सय वर्ष पूरानो यो रुख अबको केही दिनमा काटिनेवाला छ । ज्याक्सन मेग्नोलिया नामक उक्त रुखलाई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपती एन्ड्र ज्याक्सनले रोपेका थिए । सन् १८२९ देखि १८३७ सम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका ज्याक्सले आफ्नी पत्नीको सम्झनामा उक्त रुख रोपेका थिए । यो रुख धेरै मानेमा निकै विशेष छ । यहीँ रुखको छहारीमा कैयन् ऐतिहासिक कार्यक्रमहरु आयोजना भएका छन् । सन् १९२८ देखि १९८८ सम्म अमेरिकाको २० डलरको नोटमा यहीँ रुखको चित्र छापियो । तर अब यो रुखको आयु सकिएको छ...Read More
प्रकाशित : पौष १५, २०७४ | १५० पटक हेरिएकोसमाचार
कोरिया, दक्षिण कोरियामा कामदारको तलब १६ दशमलव ४ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेको थियो, यसरी तलब वृद्धि गर्ने निर्णय सँगै कोरियामा कार्यरत लाखौ कामदार तथा ४५ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदार हर्षित छन् । कोरिया सरकारले सन् २०१८ लागि इपिएस लगायत सम्पूर्ण कामदारको तलब १६.४ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । तलव वृद्धि भएसँगै कामदारको तलब प्रतिघण्टा ७५३० कोरियन वोन अर्थात नेपाली झण्डै ६८३ रुपैया पुगेको छ । जस अनुसार दैनिक आठ घण्टा काम गरेपछि महिनाको न्यूनतम तलब १५७३७७० वोन अर्थात मासिक नेपाली झण्डै एक लाख ४२ हजार सात सय ४७ रुपैया हुने छ । आगामी वर्षका लागि वृद्धि भएको...Read More
प्रकाशित : पौष १४, २०७४ | १६३ पटक हेरिएकोसमाचार
डाक्टर र इन्जिनियर बन्न आएकाहरु आपत्तिजनक अवस्थामा प्रहरीको फन्दामा
पढेर डाक्टर बन्ने सपना लिएर आएका युवती र इन्जिनियरिङ पढिरहेका युवकहरुलाई प्रहरीले आपत्तिजनक हालतमा पक्राउ गरेको छ । यहाँ लामो समयदेखि व्यवसायिक यौनधन्दा चलिरहेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनामा पढ्न आएका यी युवक इन्जिनियरिङ पढ्दै थिए । पक्राउ परेका युवतीहरु एमबीबीएस पढ्दै थिए । यी सबै युवक युवतीहरु अन्तिम परीक्षाको तयारी गरिरहेका थिए । प्रहरीका अनुसार दुवै युवतीलाई सम्झाइबुझाइ गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । दुई युवक र घरमालिक तथा होस्टल संचालकलाई मुद्दा चलाइएको छ । ती दुई युवक बस्ने होस्टलमै यस्तो काम भइरहेको थियो । दुवै युवतीहरु साँझ ५ बजे होस्टलको नियमअनुसार रजिष्टरमा आफन्तकहाँ...Read More
प्रकाशित : पौष १३, २०७४ | १७२ पटक हेरिएकोसमाचार
एजेन्सी । यी सुन्दरीहरुको रुपले जोकोही पनि मोहित हुन सक्छ । किनकी यिनीहरुको सुन्दरता नै त्यस्तै छ । तर यिनीहरु प्रति आर्कषण अलि कम हुन सक्छ, जब उनी अपराधि हुन् भन्ने थाहा हुन्छ । भन्ने गरिन्छ कि केटीहरुलाई ब्याड बोइज निकै मन पर्छ । तर के पुरुषको हकमा यो लागु हुन्छ ? के पुरुषहरुलाई ब्याड गर्ल्स मन पर्छ त ? संसारका यी खतरनाक सुन्दरी अपराधिहरुको सुन्दरता देख्ता उनीहरु अपराधि हुन् भन्नेमा विश्वास लाग्ने छैन । १. एमाण्डा नोक्स (Amanda Knox, United States) एमाण्डा नोक्सको फोटो २००७ मा समाचार पत्र मार्फत सार्वजनिक भयो जब उनीले आफ्नै रुममेटको क्रूर हत्या गरेको आरोपमा...Read More